Dia anontanio Aho | Fondation des Choisis de Jésus
Dia anontanio Aho
1B_40: Anaka, alohan’ny hangalanao fanapahan-kevitra, dia anontanio Aho. Angataho Aho hanome tolo-tsaina anao dia hataoko izany. Dia avy eo tanteraho araka izay voarainao ao anatin’ny fonao. Manàna fitokisana Amiko ! Ekeo ireo sakana na ireo fahasaròtana, amin’ny fahafantarana fa eo Aho hanampy anao hamaha an’izy ireo. Ataovy izay ataonao ao anatin’ny fahatokisana tanteraka fa miaraka aminao mandrakariva Aho.